Inona no tokony homaninao amin'ny orinasanao fandokoana vaovao?
Betsaka ny mpanjifa te-hiditra amin'ny indostrian'ny famokarana loko famafazana te-hahafantatra izay fanomanana tokony hatao alohan'ny famokarana. Ny lahatsoratra manaraka dia hampahafantatra anao amin'ny antsipiriany avy amin'ny lafiny telo amin'ny fitaovana, ny tontolo iainana ary ny fitaovana. Raha vao vaovao ianao dia mety hanampy anao ity lahatsoratra ity. ...
Inona no atao hoe milina fanodinana? Firy ny safidy anananao amin'ny fampidirana mpanonta amin'ny tsipika famenoanao?
Inona no atao hoe Coder? Mpanjifa maro no nanontany an'io fanontaniana io rehefa nahazo ny teny hoe milina fametahana marika. Ny coder dia mpanonta tsotra indrindra ho an'ny etikety. Ity lahatsoratra ity dia hampahafantatra anao ny mpanonta mahazatra maro amin'ny tsipika famokarana. 1, Coder / Coding Machine Ny milina fanodinana tsotra indrindra dia co...
Famenoana mangatsiaka aseptika sy famenoana mafana
Inona no atao hoe famenoana mangatsiaka aseptika? Ampitahao amin'ny famenoana mafana mahazatra? 1, Famaritana ny famenoana aseptika Ny famenoana mangatsiaka aseptika dia manondro ny famenoana mangatsiaka (mari-pana mahazatra) ny vokatra zava-pisotro eo ambanin'ny fepetra aseptika, izay mifandraika amin'ny fomba famenoana mafana amin'ny hafanana matetika ampiasaina amin'ny ...
Inona no misy fiantraikany amin'ny fiainan'ny milina?
1. Voalohany indrindra: Ny kalitaon'ny milina. Ny mpanamboatra samihafa sy ny karazana milina samihafa dia mety mampiasa singa elektronika amin'ny marika sy fanamafisana samihafa. Ny milina dia ahitana mekanika maro, ary ny mekanika tsirairay dia mifamatotra amin'ny fitaovana samihafa. Ny ambony ny...
Ny fitsidihan'ny mpanjifa Kongoley amin'ny milina famenoana.
nataon'ny admin tamin'ny 19-12-18
Nandritra ny 2nd China International Import Expo tamin'ny Novambra 2019 dia tonga tany Shanghai avy any Congo, Afrika Atsimo ny delegasiona afrikanina 2019. Nitsidika sy nanamarina ny milina takian'izy ireo ny tompony, ny orinasanay no mpamatsy milina famenoana lehibe amin'ny fandaharam-potoanany. Izahay, Higee Machinery, famatsiana mifototra amin'ny famokarana...
Inona ny tombony sy ny tsy fahampian'ny tavoahangy PLA sy PET amin'ny indostrian'ny famenoana?
nataon'ny admin tamin'ny 19-12-17
Miorina amin'ny olana momba ny fanasarahana fako, ny vidiny ary ny fiarovana ny tontolo iainana, ny tavoahangy PLA ve no mahazatra amin'ny indostrian'ny zava-pisotro? Nanomboka ny 1 Jolay 2019, Shanghai, Shina, dia nampihatra ny fanasarahana fako henjana indrindra. Tany am-piandohana dia nisy olona teo anilan’ny dabam-pako nanampy sy n...
miteny sy raikitra-toerana
nataon'ny admin tamin'ny 19-12-16
ny fahasamihafana eo amin'ny karazana fehin-kibo-roller sy ny karazana toerana voafaritra ho an'ny fametahana tavoahangy boribory Matetika, ny mpividy dia sahiran-tsaina amin'ny milina fametahana tavoahangy boribory miaraka amin'ny fitaovana fitenenana sy raikitra. Afaka manisy marika tavoahangy boribory izy ireo. Inona no maha samy hafa azy ireo? Ahoana no hisafidianana milina mety? Andao isika hiditra...
nataon'ny admin tamin'ny 19-12-14
2017 Shina fitaovana ara-teknika & entana fampirantiana
nataon'ny admin tamin'ny 19-12-13